We,aglobal coalition of 87 civil society organizations, urgently call upon UN member states to take immediate steps to address the human rights abuses and humanitarian catastrophe engulfing Myanmar’s ethnic Rohingya population. UN Secretary-General Antonio Guterres and UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad al Hussein have described the Myanmar security forces’ ongoing campaign against the Rohingya in northern Rakhine State as ethnic cleansing. As more evidence emerges, it is clear that the atrocities committed by Myanmar state security forces amount to crimes against humanity. The United Nations and its member states need to take urgent action.
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မှုများအဆုံးသတ်ရန် မန်မာနိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ
ကျွန်တော်တို ၏ xxxxx ကမ္ဘာ့အရပ်ဖက်အဖွဲ အစည်းများက မန်မာနိုင်ငံ၏
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုကို ၀ါးမျိုဖျက်ဆီးသည့်လူ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု၊
လူသားမျိုးနွယ်ဆိုင်ရာကပ်ဘေးဆိုက်မှုများကို ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ ၀င်နိုင်ငံများက
ရးမှူးချုပ် Antonio Guterresနှင့် လူ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Zeid Ra’ad Al
Husseinတို က ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ်
မန်မာ့လုံခြုံရေးတပ်များက ဆက်လက် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်နေကြောင်းကို
ဖ်ါပြခဲ့သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော အထောက်အထားများအရ
မန်မာ့လုံခြုံရေးတပ်များကျူးလွန်သည့် ရက်စက်မှုများက လူသားမျိုးနွယ် အပေါ်ကျူးလွန်သည့်
ရာဇ၀တ်မှုဆိုတာရှင်းပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ၄င်း၏အဖွဲ ၀င်နိုင်ငံများက
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီက မန်မာအစိုးရကို အရေးယူဖို စဉ်းစားရန်၊ ကုလသမဂ္ဂ
အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရန်၊ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ် ကျူးလွန်သည့်ရာဇ၀တ်မှုများ အဆုံးသတ်ရန်နှင့် တားဆီရန်၊ အစဉ်အမြဲ
တာဝန်ခံမှု၊ ညီညွတ်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုစသောကျင့်ဝတ်များရှိသည့်နိုင်ငံ(၁၄၄)နိုင်ငံမှ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာကယ်တင်ရေးတပ်(ARSA)၏ တိုက်ခိုက်မှုများကို တုန် ပန်ရန်၊
မန်မာ့လုံခြုံရေးတပ်များက စစ်ဆင်ရေးလုပ်သဖြင့်၊ သြဂုတ်လ၊ (၂၅)ရက်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာ
(၄)သိန်းကျော် နယ်စပ်ဖြတ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။
ယင်းစစ်ဆင်ရေးတွင် ရိုဟင်ဂျာများကို ပစ်မှတ်ထားသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ မိုင်းထောင်ခြင်း၊
လုယက်မီးရှို ခင်းများ ပါဝင်ပြီး၊ ဂိုလ်တုဓါတ်ပုံနှင့် မျက်မြင်အထောက်အထားများအရ
ရွာပေါင်း(၂၀၀)ကျော်ပျက်စီးခဲ့သည်။ အခြားလူမျိုးစု ထာင်ပေါင်းများစွာကိုလည်
အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ရွှ ပာင်းခဲ့ကြသည်။
ကုလသမဂ္ဂနှင့် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များ၏ အပြင်းအထန်ရှုတ်ချမှုက မန်မာ၏ ရက်စက်မှုကို
အဆုံးမသတ်နိုင်ပါ။ စက်တင်ဘာလ(၁၁)ရက် လူ
အခွင့်အရေးကောင်စီကိုတင်သည့်အဆိုထဲတွင် ၂၀၁၆တွင် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူ
အခွင့်အရေးချိုးဖေက်မှုက ကျယ်ပြန် ပီး၊ စနစ်တကျ တိုက်ခိုက်မှုများက
လူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ကျူးလွန်သည့် ရာဇ၀တ်မှုမြောက်ကြောင်း Zeidက
သတိပေးခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ(၂၅)ရက်ကတည်းက ရိုဟင်ဂျာများအပေါ်
မန်မာ့လုံခြုံရေးတပ်များ၏ ထိုးစစ်က လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သည့်
ရာဇ၀တ်မှုမြောက်ကြောင်း အရပ်ဖက်အဖွဲ များက သတိပေးသည်။ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ
၀င်များက အရေးယူရန်၊ မန်မာစစ်တပ်နှင့် အရပ်ဖက် ခါင်းဆောင်များကို
မကြာသေးမှီအချိန်အထိ ဥရောပသမဂ္ဂသည် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင်
မန်မာနိုင်ငံ၏ လူ အခွင့်အရေး အခြေအနေအပေါ် စ်ပါတ်လည်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုခုချမှတ်ရာမှာ
အဓိက တာဝန်ခံသူဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည်နှစ်က အီးယူက ၂၀၁၆ခုနှစ်
အ်ာကတိုဘာလထဲမှစပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် အစိုးရ၏ အကြမ်းဖက်မှုများတွင်
ကြိုးပမ်းမှုများကို ရပ်တန် အာင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ လူ အခွင်းအရေးနှင့်
လူသားမျိုးနွယ်အကျပ်အစည်းများအပါအ၀င် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖစ်ပွားနေသည့်
အခြေအနေများကို တုန် ပန်ရာတွင် အထွေထွေညီလာခံ၏ အရေးယူမှုတစ်ခု အနေနှင့်
ဤဆုံးဖြတ်ချက်တည်မြဲစေရန် အခြားဆိုင်ရာနိုင်ငံများကဲ့သို အရှေ တာင်အာရှ
အာဆီယံအသင်း၊ အစ္စလာမ်အဖွဲ များနှင့်အတူ လူကိုင်ရန် အီးယူအဖွဲ ၀င်များကို
အထွေထွေညီလာခံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်က လူ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေကို
အခုချက်ချင်းအဆုံး သတ်ရန် တာင်းဆိုရမည်။ လူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ
များကို လိုအပ်သည့် လူတွေထံ အမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်၊ ဂျနီဗာလူ
အခွင့်အရေးကောင်စီက ခန် အပ်ထားသော ကုလသမဂ္ဂအချက်အလက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ
ကိုလည်း လူ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု များကိုစုံစမ်းရန်၊ မန်မာနိုင်ငံအတွင်း
၀င်းရောက်ခွင့်ရရန် တာင်းဆိုသင့်သည်။ ရိုဟင်ဂျာတွေ အခြားဒုက္ခသည်များ၊
ရွှပြောင်းခံရသူများနှင့် မူလနေရာပြန်လာနိုင်အောင် မန်မာအာဏာပိုင်များက
လုပ်ဆောင်ပေးဖို တာင်းဆိုရမည်။ လတ်တလောအကြပ်အတည်းဆိုက်နေသည့်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပိုကွဲပြန် ကြဲ နသည့် ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆင်များထံ င်ငံတကာ တရားရုံးမှာ
ခ်ါယူနိုင်အောင် နည်းလမ်းရှာဖို တိုက်တွန်းရမည်။
လူ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်သော ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် တာဝန်ရှိသူများကို ပစ်မှတ်ထား
ဘဏ္ဍာရေး ပိတ်ဆို အရေးယူရန် စဉ်းစားသင့်သည်။ လာလောဆယ် မန်မာနိုင်ငံနှင့်
စစ်ရေးကူညီပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုတွေကို ချက်ချင်းဆိုင်းငံ့ထားရန်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရက်စက်သောလူ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေလို အစိုးရများ၊
ယူအန် အရာရှိများ၊ သံတမန်များက စည်းဝေးပွဲမှာမိန် ခွန်းပြောရလျှင်
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ရေး ထိုးစစ်နှင့် လူသားများအပေါ်ကျူးလွန်သည့် အခြားရာဇ၀တ်မှု
များကို ရပ်တန် အာင် ၄င်းတို ၏ သံတမန် နည်းလမ်းများကို သုံးဖို
ပျက်ကွက်နေပါသည်။ ဘာမှမလုပ်ဘဲ အကြီးအကျယ်ဖျက်စီးမှု၊ သတ်ဖြတ်မှု၊
ထာင်ပေါင်းများစွာ ပာင်းရွှေ မှုများကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ခွင့် မပေးသင့်ပါ။
พวกเรา xx องค์กรพันธมิตรระดับโลกของหน่วยงานภาคประชาสังคม
แอนนิโอ กูเตียเรส (Antonio Guterres) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ และซาอิด
ราอัด อัล ฮุสเซน (Zeid Ra&#39;ad Al Hussein)
เราขอกระตุ้นผู้แทนในองค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะผู้แทนจาก 114
ประเทศที่แสดงพันธกิจต่อจรรยาบรรณ ความรับผิด ความกลมเกลียว
และความโปร่งใส (Accountability, Coherence and Transparency (ACT) Code
of Conduct) ซึ่งต่างสัญญาจะสนับสนุน “ปฏิบัติการในเวลาที่ทันท่วงทีและเด็ดขาด”
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และอาชญากรรมสงคราม ให้ดำเนินการโดยทันที
ชาวโรฮีนจากว่า 400,000 คนได้อพยพข้ามพรมแดนเข้าสู่บังคลาเทศตั้งแต่วันที่ 25
(Arakan Rohingya Salvation Army - ARSA) ในรัฐยะไข่
ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางในหมู่บ้านกว่า 200 แห่ง
ในถ้อยแถลงเปิดการประชุมของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 11 กันยายน
นายซาอิดตั้งข้อสังเกตว่าในปี 2559 เขา
ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเมียนมาต่อชาวโรฮีนจานับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม
จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้
anization of Islamic Cooperation) และสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ASEAN) รวมทั้งรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อกลุ่มประชากรชาวโรฮีนจาและชาวมุสลิมอื่น ๆ ในรัฐยะไข่
ดับทวิภาคี พหุภาคีและระดับภูมิภาคที่กระทำได้ เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลเมียนมา
และการทำให้ประชาชนหลายแสนคนพลัดถิ่น ประเทศต่าง ๆ จึงไม่ควรเพิกเฉย